5 - BookCubicle
" မင်း ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ " Durotan က ခပ်တိုးတိုး မေးလိုက်သည်။
" မင်းကရော ဘာလုပ်နေတာလဲ " ထိုလူက ရုတ်ချည်း ပြန်မေးသည်။
သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေကြ၍ Durotan ရုတ်တရက် ရယ်လိုက်မိသည်။
" မင်းနဲ့ တူတူပဲ " Durotan ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
သူ့အသံက ပျော့ပျောင်းနေဆဲ။ အခြားသူများကတော့ အိပ်ပျော်နေဆဲပင်။ "ငါတို့ ဒီမှာပဲ စကားဆက်ပြောနေကြမလား သွားလုပ်ကြမလား"
သူ့ရှေ့က ဝိုးတဝါး ပုံစံ အရွယ်အစားကို ကြည့်၍ ထိုသူသည် ကြီးမားသော အထီးတစ်ကောင်ဟု Durotan ယူဆလိုက်သည်။ သူနှင့် အသက်တူတူလောက်ပင် ဖြစ်မည်။ သူ့အနံ့ကိုရော အသံကိုပါ မရင်းနှီးသောကြောင့် Frostwolf အဖွဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သေချာသွားသည်။ တော်တော်ကြီးသော
စွန့်စားမှုဖြစ်သွားပေပြီ။ လုံးဝ မထွက်ရန် တားမြစ်ထားသော တဲအိမ်မှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထွက်သည်သာမကဘဲ သူ့အဖွဲ့မှ မဟုတ်သော အခြားအဖွဲ့သား တစ်ယောက်နှင့်ပါ ပူးပေါင်း၍ ထွက်ဦးမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသူက ခေတ္တ ငြိမ်သက်သွားသည်။ သူ့ခေါင်းထဲတွင်လည်း ထိုသို့ပင် တွေးနေမည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပေ။
"ကောင်းပြီလေ" နောက်ဆုံးတွင် သူပြောသည်။
Durotan က အမှောင်ထဲတွင် ထပ်မံ ရွေ့လျားလိုက်သည်။ သူ့လက်များက ရွက်ဖျင်တဲ၏ နံရံကို ထိတွေ့နေသည်။ Orc အငယ်လေး နှစ်ယောက်သည် တဲနံရံ အကာကို ဆွဲဖယ်လိုက်ကာ အပြင်ဘက်ရှိ အေးခဲနေသော ညဆီသို့ ခြေလှမ်းလိုက်သည်။
Durotan က သူ့အဖော်ကို လှည့်၍ ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုသူက သူ့ထက်ဗလတောင့််ပြီး အရပ်ရှည်သည်။ Durotan မှာ သူ့ အဖွဲ့ထံရှိ ရွယ်တူများထဲတွင် အကောင်အကြီးဆုံး ဖြစ်သောကြောင့် အခြားသူတစ်ယောက်က သူ့ထက် အရပ်ရှည်နေသည်ကို နေသားမကျ ဖြစ်နေသည်။ သူ အနည်းငယ် စိတ်ပူသွားသည်။ ယခုမှ ကမြင်းရန်အတွက် မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်သော ထိိုသူကလည်း သူ့ကို ပြန်လှည့်ကြည့်ရာ Durotan တစ်ယောက် အကဲခတ်ခြင်းခံနေရကြောင်း သူ့ကိုယ်သူ သိလိုက်သည်။ သူ့ပုံစံကို သဘောကျသွားပုံဖြင့် ထိုသူက ခေါင်းတစ်ချက် ညိတ်သည်။
သူတို့ စကား မပြောရဲကြပါ။ Durotan က ရွက်ဖျင်တဲနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သည့် သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပြီး နှစ်ယောက်လုံး ထိုသစ်ပင်ဆီသို့ ဦးတည်သွားကြသည်။ အချိန်မှာ ခဏလေး ဖြစ်သော်လည်း တစ်သက်လောက်ကြာသည်ဟု ထင်ရသည်။ ထိုခဏလေးတွင် လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်ကများ ယောင်ယမ်း၍ ခေါင်းကို လှည့်ကြည့်လိုက်မည်ဆိုပါက သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးကို ထင်းထင်းကြီး မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် သူတို့ကို သတိမထားမိကြပါ။
နှင်းရေခဲကျောက်စက်များပေါ် အလင်းပြန်နေသော လရောင်မှာ လင်းလွန်းလှသောကြောင့် နေ့ခင်းကြောင်တောင် လင်းထိန်နေသောအချိန် ရောက်နေသည်ဟု Durotan ခံစားနေရသည်။
သူတို့ ခြေထောက်များအောက်က ရေခဲများကို နင်းမိသည့် တကြွိကြွိအသံမှာလည်း ဒေါသထွက်နေသည့် ဘီလူးတစ်ကောင် အသားကုန်အော်နေသံလို ကျယ်လောင်နေသည်ဟု ထင်ရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သစ်ပင်ကြီးဆီသို့ ရောက်သွားပြီး
သူတို့နှစ်ယောက်လုံး သစ်ပင်နောက်တွင် မှောက်ချလိုက်ကြသည်။ Durotan က အတန်ကြာအောင့်
ထားသည့် အသက်ကို နောက်ဆုံး ရှူထုတ်လိုက်သောအခါ ရေငွေ့ပြန်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သူနှင့် အဖော်ပါလာသူက သူ့ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ကာ ရယ်လိုက်သည်။
" ငါက Orgrim ၊ Blackrock အဖွဲ့ ၊
Telkar Doomhammer မျိုးနွယ်က "
ထိုသူက ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားမှုအပြည့်ဖြင့် ခပ်တိုးတိုးပြောသည်။
Durotan က အထင်ကြီးသွားသည်။ Doomhammer မျိုးနွယ်မှာ မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲထဲတွင် မပါသော်လည်း အတော်လေး နာမည်ကြီးပြီး ဂုဏ်ရှိသော မျိုးနွယ်ဖြစ်ပေသည်။
" ငါက Durotan ၊ Frostwolf အဖွဲ့ ၊
Durotan ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ယခုကတော့ အခြားအဖွဲ့၏ အမွေခံဖြစ်သူနှင့် တူတူထိုင်နေကြောင်းကို သိပြီး Orgrim က တစ်ခုခုတုံ့ပြန်ရမည့် အလှည့်ပင်ဖြစ်သည်။ သူက အသိအမှတ်ပြုဟန်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြသည်။
သူတို့၏ စွန့်စားမှုကြီးကို အောင်ပွဲခံသည့်အနေဖြင့်
ခဏမျှ သည်အတိုင်း ထိုင်ကြသည်။ Durotan ဝတ်ထားသော ထူထဲသည့် ဝတ်ရုံရှည်ကို စီးဝင်လာသော စိုစွတ်မှုတစ်ခုနှင့်အတူ အအေးဓာတ်ကိုပါ ခံစားလိုက်ရသည်။ ထိုအေးစက်မှုက သူ့ခြေထောက်ကိုပါ ရောက်သွားသည်။ သူက လူစုကို လက်ညှိုး ထပ်ညွှန်ပြလိုက်သောအခါ Orgrim က ခေါင်းထပ်ညိတ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ဂရုတစိုက်ဖြင့်သစ်ပင်ကိုကျော်ကြည့်လိုက်ပြီး အာရုံစူးစိုက်စွာနားထောင်လိုက်သည်။ သူတို့ သေလုမတတ်သိချင်နေသည့် လျှိူ့ဝှက်အကြောင်းအရာများကို ကြားရမှာ သေချာသည်။ မီးပုံကြီးထံမှ တဖျစ်ဖျစ် မြည်သံများနှင့် စည်းချက်ညီသော ဗုံသံအကျယ်ကြီးများကြားတွင် စကားသံများက သူတို့ထံ မျောပါလာသည်။
" နတ်ဆရာက ဒီဆေါင်းတွင်းမှာ အဖျားကြောင့် အလုပ်ရှုပ်နေတယ် "
Durotan ၏ဖခင်ဖြစ်သော Garad က ပြောသည်။ သူက အောက်သို့ ငုံ့လိုက်ပြီး မီးပုံဘေးတွင် အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေသော ဝံပုလွေ အဖြူရောင်ကြီးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ အဖြူရောင် အမွေး​များကြောင့် Frostwolf တစ်ကောင် ဖြစ်ကြောင်း သိသာသော ထိုသတ္တဝါကြီးက နှစ်လိုစွာ အသံပျော့ကလေးဖြင့် ညည်းလိုက်သည်။
" ကဘေးအငယ်တစ်ယောက် နေပြန်​ကောင်းသွားရင် နောက်တစ်ယောက်က ဖျားရော"
"ကျွန်တော်ကတော့ နွေရာသီအတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီ " နောက် အထီးတစ်ယောက်က မတ်တတ်ရပ်ကာ ထင်းတုံးတစ်တုံးကို ထိကန်ရင်း ပြောသည်။
" တိရစ္ဆာန်တွေလည်း တော်တော်ဒဏ်ခံနေရတယ်
ပွဲတော်ပြင်ဖို့အတွက် သားကောင်ရှာတုန်းက clefthooves ကို တော်တော်နဲ့ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး"
"Klaga က အရိုးတွေနဲ့ စွပ်ပြုတ်ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်တယ် ဒါပေမယ့် သူ ဘာ အမွှေးအကြိုင်တွေ ထည့်လဲ တော့ လုံးဝ မပြောပြဘူး "
တတိယတစ်ယောက်က ကလေးထိန်းနေသော မိန်းမ တစ်ယောက်ကို စိုက်ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည်။ Klaga ဟု ထင်ရသော ထိုမိန်းမက တခစ်ခစ်ရယ်သည်။
"အဲ့ဒီ့ ဟင်းချက်နည်းကို ဒီကလေးလေးအရွယ်ရောက်လာမှ သူ့တစ်ယောက်တည်းကို ပေးမှာ "
Klaga က ပြန်ပြောကာ ရယ်လိုက်ပြန်သည်။
Durotan အံ့သြလွန်းသဖြင့် ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားသည်။ ဘေးတွင်ရှိသော Orgrim ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ သူလည်း Durotan လိုပင် ကြက်သေသေနေလေသည်။
ဒါကြီးက အဲ့ဒီ့လောက် အရေးကြီးတဲ့ မဟာလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးလား? အရေးကြီးလွန်းလို့ ကလေးတွေ တဲထဲကထွက်ပြီး လာနားထောင်လို့မရအောင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး တားမြစ်ထားတဲ့ အကြောင်းက တကယ်ကြီး ဒါတွေ?
လရောင်က လင်းထိန်နေသောကြောင့် Durotan သည် Orgrim မျက်နှာကို အတားအဆီးမရှိဘဲကောင်းကောင်း မြင်နေရသည်။ သူ့ မျက်ခုံးတွေက တွန့်ရှုပ်လာပြီး မျက်မှောင်ကြုတ်နေလေသည်။
" မင်းနဲ့ငါ ဒီအထိ တူတူလာခဲ့ရတာ ဒီ့ထက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို သိချင်လို့လေ Durotan ရာ"
သူက အသံတိုးတိုးနှင့် သုန်သုန်မှုန်မှုန်ပြောသည်။
Durotan မချိသွားဖြဲ ရယ်လိုက်ပြီး ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။ သူလည်း သေချာပါသည်။
ပွဲတော်မှာ နောက်ထပ် ၂ရက် ကျန်ရှိပေသေးသည်။
Durotan နှင့် Orgrim တို့မှာ နေ့ရော ညပါ တပူးပူး တတွဲတွဲနှင့် အပြင်ထွက်ကြကာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စိန်ခေါ်ပြိုင်ပွဲများ ဆင်နွှဲကြလေသည်။ အပြေးပြိုင်ခြင်း၊ သစ်ပင်တက်ခြင်း၊ အားပြိုင်ခြင်း၊ ခြေလုံခြင်း စသည်ဖြင့် သူတို့ တွေး၍ရသမျှ ယှဥ်ပြိုင်ကြရာ တမင်တကာ
တိုင်ပင်ထားသကဲ့သို့ တစ်ယောက်တစ်လှည့် အနိုင်ရကြသည်။ နောက်ဆုံးနေ့တွင်မူ Orgrim က သူမသာ ကိုယ်မသာ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေကို ချေဖျက်ရန် ပဥ္စမအကြိမ် ပြိုင်ပွဲလုပ်ရန် စိန်ခေါ်သောအခါ Durotan စိတ်ထဲမှ အရာတစ်ခုက သူ့အား ငြင်းဆန်ရန် ပြောလိုက်သည်။
" ငါတို့ သာမန် မြင်နေကျ ပြိုင်ပွဲတွေ မလုပ်ဘဲ နေရအောင် "
Durotan က ပြောသည်။ ထိုစကားသံများသည် သူ့ထံမှ ထွက်ပေါ်လာသည်ဖြစ်ကြောင်း လုံးလုံးလျားလျား သိနေသည့်တိုင် ဘာလို့ ဒါတွေပြောနေမိတာပါလိမ့် ဟု သူ့ဟာသူ ပြန်မေးနေမိသည်။
"ငါတို့ လူမျိုး သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ဟာတစ်ခုကို လုပ်ရအောင်"
Orgrim ၏ တောက်ပသော မီးခိုးရောင် မျက်လုံးများက ဖျတ်ခနဲ တောက်ပသွားပြီး ရှေ့သို့ တိုးလာသည်။
“မင်းနဲ့ငါ သူငယ်ချင်း လုပ်ကြရအောင်”
Orgrim က အံ့ဩမှုကြောင့် ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်သွား လေသည်။
“ ဒါပေမယ့် ငါတို့က အဖွဲ့ မတူဘူးလေ”
Orgrim အသံမှာ မသိလျှင် Durotan က ကမ္ဘာ့ရန်ဖက်များဖြစ်သည့် Great Black Wolf နှင့် Mild Talbuk တို့အား မဟာမိတ် ဖွဲ့ခိုင်းနေသည့် လေသံပေါက်နေသည်။ Durotan က လက်ခါလိုက်ပြီး ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“ငါတို့က ရန်သူတွေမှ မဟုတ်တာ”
“မင်းဘေးကို ကြည့်လိုက်လေ ၊ အဖွဲ့တွေ အကုန်လုံး တစ်နှစ် နှစ်ခါ ဒီကို တူတူလာပြီး ပွဲလာလုပ်ကြတာပဲကို ဘယ်တုန်းက ရန်ဖြစ်ဖူးလို့လဲ?”
“ဒါပေမယ့်………ငါ့အဖေပြောတော့ အခုလို ခဏခဏလာနေရလို့ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးက မပျက်သေး တာတဲ့”
Orgrim က ဆက်ပြောသည်။ သူ့ မျက်ခုံးများက စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့် တွန့်ချိူးနေသည်။ Durotan ၏ စကားလုံးများက စိတ်ပျက်မှုကြောင့် ခါးသီးလာသည်။
“ကောင်းပါပြီ။ မင်းကို သူများတွေထက် သတ္တိရှိတယ် ထင်ခဲ့မိတယ် Doomhammer မျိူးနွယ် Orgrim၊ ဒါပေမယ့် ငါမှားသွားတယ်။ မင်းလည်း သူတို့လိုပါပဲ။ ကြောက်တတ်တယ်၊ ရှက်တတ်တယ်၊ သမားရိုးကျ လမ်းကြောင်းကနေ ကျော်ပြီး မမြင်တတ်ဘူး၊ မကြည့်ရဲဘူး”
ထိုစကားများအားလုံး သူ့ရင်ထဲမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Durotan အနှစ်နှစ် အလလက ကြိုတွေးကာ စီစဉ်ထားမည်ဆိုလျှင်လည်း သည့်ထက် ပိုကောင်းစရာ ရှိလာမည်မဟုတ်ပေ။ Orgrim ၏ အညိုရောင် မျက်နှာမှာ နီရဲသွားပြီး မျက်လုံးများ အရောင် လက်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။
“ငါ ငကြောက် မဟုတ်ဘူးကွ” သူက ဒေါသဖြင့် အော်ပြောလိုက်သည်။
“ငါ ဘယ် စိန်ခေါ်ပွဲကိုမှ လက်မလျှော့ခဲ့ဘူး နောက်မှပေါက်တဲ့ Frostwolf ကောင်ရဲ့”
သူက Durotan ပေါ်ကို ခုန်အုပ်လိုက်ရာ လဲကျသွားပြီး နှစ်ယောက်သား လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကြသည်မှာ နတ်ဆရာများ လာရောက်ဖြန်ဖြေကုသပေးရသည့် အထိပင်။ မြင့်မြတ်သည့်မြေပေါ်တွင် ရန်ဖြစ်သည်မှာ မသင့်တော်ကြောင်း ဆုံးမကြသည်။
Frostwolf အဖွဲ့၏ နတ်ဆရာခေါင်းဆောင်က ဆူသည်။ ထိုသူမှာ တစ်ဖွဲ့လုံးမှ “မိခင်ကြီး” ဟုခေါ်ရသော ရှေးဟောင်း orc မကြီး Kashur ဖြစ်ပေသည်။
“စကားနားမထောင်တဲ့ကလေးဆိုပြီး မရိုက်ဘဲနေရလောက်အောင် မင်းက အသက်မကြီးသေးဘူးနော် Durotan လေး "
Orgrim ကို ဆွဲခေါ်သွားသော နတ်ဆရာထံမှလည်း တူညီသောဆူပူသံများ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ သူ့ နှာခေါင်းမှသွေးများ စီးကျနေသော်လည်း နတ်ဆရာက Orgrim ၏ ရင်ဘတ်မှ ဟက်တက်ကွဲနေသော ဒဏ်ရာကြီးကို ကုသပေးလိုက်သည်ကိုကြည့်ရင်း Durotan က ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးလိုက်သည်။ Orgrim လည်း သူ့ကိုမြင်သွားကာ ပြန် အံကြိတ်ပြလိုက်သည်။
စိန်ခေါ်ပွဲမှာ စတင်ခဲ့လေပြီ။ အပြေးပြိုင်ခြင်း အလေးမပြိုင်ခြင်း တို့ထက် ပိုအရေးကြီးသော နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်လုံးကလည်း ဘယ်နည်းနှင့်မျှ အရှုံးပေးကြမည်မဟုတ်ပေ။ မတူသော အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မှ ကောင်လေးနှစ်ယောက် မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းသည် မှားယွင်း‌ကြောင်း ၀န်မခံလိုကြ။
သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်ယောက် မရှိတော့မှသာ သည်ပွဲ အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟု Durotan ခံစားနေရသည်။ မဟုတ်သေးပါ။ ထိုသို့ မရှိတော့လျှင်တောင် အဆုံးသတ်ချင်မှ သတ်ပေလိမ့်မည်။
Arr pay ny pr DL❣️